သင်၏နှုတ်ခမ်းမွှေးများကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။ နှုတ်ခမ်းမွှေးဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်သိကောင်းစရာများ | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
Movember လရဲ့အလယ်မှာ၊ သင့်ရဲ့ mustache ကိုဘယ်လိုပြုပြင်ရမယ်၊ ဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမယ်ဆိုတာလေ့လာပါ
ကျနော်တို့လ၏နောက်ဆုံးလမ်းပိုင်း၌ရှိကြ၏ မေလသငျသညျပြီးသားအရာ၏လှုပ်ရှားမှု ငါရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာကပြောသည် နှင့် အထီးကင်ဆာသုတေသနကိုထောက်ခံပါတယ် - ဆီးအိမ်နှင့်ဆီးကျိတ်နှစ် ဦး စလုံး - ။ မေလ (Moustche + နို ၀ င်ဘာလ) သည်၎င်း၏ပူးပေါင်းသူများမှတစ်ဆင့်ရန်ပုံငွေရှာဖွေသည် မို-ညီအစ်ကိုများ, နိုဝင်ဘာလတစ်လျှောက်လုံးသူတို့ရဲ့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်နေသော နှုတ်ခမ်းမွှေး.
ဒီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအထောက်အကူပြုလုပ်ဆောင်မှုကိုအသုံးချပြီးငါတို့လရဲ့တတိယအပတ်မှာရှိနေလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ခမ်းမွှေးကိုဂရုစိုက်ကြည့်သင့်သည်။ ဒီ post မှာတော့သင့်ကိုအကြံဥာဏ်အနည်းငယ်ပေးပါလိမ့်မယ် အဲဒါကို fix ပြုလုပ်ထိန်းသိမ်းထားပါ စုံလင်ခြင်းသို့
နှုတ်ခမ်းမွှေးကိုအဝေးထိန်းထားရန်အထူးသဖြင့်အလွန်ထူထပ်ပြီးအရွက်များလာသောအခါ၊ အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်နှစ်ပတ်တိုင်းကချုံ့။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သင်လိုအပ်လိမ့်မည် အထူးဆံညှပ်စာရေးကိရိယာကတ်ကြေးလိုအခြားကတ်ကြေးအမျိုးအစားကိုဘယ်တော့မှအသုံးမပြုပါနှင့်။ စျေးနှုန်းစတင်မစတင်မီ၊ ပူနွေးသောရေနှင့်အတူကစိုစေ.
ဒါဟာသေးငယ်တဲ့, ဖြတ်တောက်ခြင်းမပြုမီအခြေခံသည် ဆံပင် အစဉ်အမြဲဒဏ်ငွေ-toed ဖြီးအတူ ဆံပင်တိုးတက်မှု၏ညှနျကွားထဲမှာ။ ဆံပင်ညှပ်သည့်အခါအထက်နှုတ်ခမ်းထိပ်တွင်စတင်ပါ၊ ပိုလျှံသောဆံပင်အားလုံးကိုဖြတ်တောက်ပါ၊ ၎င်းသည်နှုတ်ခမ်းမွှေးကိုသတ်မှတ်ရန်နှင့်နှုတ်ခမ်းကိုဆံပင်မှလွတ်မြောက်စေရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ထို့နောက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုဖော်ပြရန်အချိန်ရောက်ပြီ။ သင်လုပ်ပြီးသောအခါသင်၏နှုတ်ခမ်းမွှေးများကို ထပ်၍ ဖြုတ်ပြီးလိုအပ်ပါကထပ်မံဖြတ်တောက်ပါ၊ ပိုလျှံသောဆံပင်များရှိသေးသည်။
အထူးသဖြင့်သင်ဟာအရေးကြီးတယ် ကြည့်ရှု နှုတ်ခမ်းမွှေးသို့မဟုတ်မုတ်ဆိတ်သည်ပုံမှန်ဖြစ်လေ့ရှိပြီးသင်၏နှုတ်ခမ်းမွှေးသို့မဟုတ်မုတ်ဆိတ်များကိုအထူးထုတ်ကုန်များဖြင့်ဆေးကြောသည်။ အတူပါ မျက်နှာဆံပင်များအတွက်တိကျသောကုသမှု။ အကောင်းဆုံးအထူးပြုကုမ္ပဏီများအနက်တစ်ခုမှာအင်္ဂလိပ်ဖြစ်သည် မုတ်ဆိတ်မွေးShampoos, Conditioner နှင့်အမျိုးသားမျက်နှာစောင့်ရှောက်မှုအတွက်အထူးသီးသန့်ဆေးများကဲ့သို့သောအထူးကုသမှုများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - Movember: ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်အတွက်နှုတ်ခမ်းမွှေးစိုက်ပျိုးခြင်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု » ရိတ်လိုက်ပြီ » Movember လရဲ့အလယ်မှာ၊ သင့်ရဲ့ mustache ကိုဘယ်လိုပြုပြင်ရမယ်၊ ဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမယ်ဆိုတာလေ့လာပါ
အေးသောနေ့ရက်ကာလအဘို့ 15 ဆောင်းရာသီကုတ်အင်္ကျီ